61.5% nke okporo ụzọ gị abụghị nke mmadụ | Martech Zone
61.5% nke okporo ụzọ gị abụghị mmadụ
N’ọnwa Machị, Incapsula bipụtara otu ọmụmụ ihe gosiri imirikiti okporo ụzọ weebụsaịtị (51%) bụ nke ndị na-abụghị mmadụ mepụtara, 60% nke ndị o doro anya na obi. Ozi ojoo ojoo… bot traffic is up and up tremendously. N'ezie, Ruo 61.5% nke okporo ụzọ ị na-ahụ na Google Analytics emeghị site n'aka mmadụ ma ọlị, mana bot.
Nke a bụ nnukwu nchọta nye ndị mmekọ anyị na Atụmatụ saịtị, ndị na-agba ọsọ ahụ Edge nke Web Radio gosi na anyi na akwado. Ọ pụtara ntakịrị ihe nye ụlọ ọrụ, ndị nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara ọnụego ntụgharị ji na-ada na saịtị ha. A bot na-agaghị tọghata… ma ha ga-skew n'ozuzu akakabarede arụmọrụ nọmba!
Tags: okporo ụzọ bothackingndị na-epersonomiscraperspammers
Onyinye Kacha Ewu N'afọ a maka Millennials? Ndumodu: Ọ bụghị XBox One
Disemba 22, 2013 na 12:56 mgbede
Ọ bụrụ na m nwere ike ịrụpụta ụzọ maka ịzụ ahịa na 'Non Human Traffic', anaghị m ekwu maka nne di m ebe a, enwere m ike ịkpata akụ.
Disemba 22, 2013 na 10:12 mgbede
Ọ bụrụ na ọ bụ crawler na-ezu ohi ọdịnaya gị - ikekwe inwe ụfọdụ njikọ njikọ 🙂
Anyị maara ma ule a bụ kpọmkwem ụlọ ọrụ? Ị chere na ọ nwere ike ịka njọ/ka mma na ụfọdụ ụlọ ọrụ karịa ndị ọzọ?